Soomaaliya Oo Ka Hadashay Khilaafka Wabiga Nile Iyo Taageeradii Masar Ay U Fidisay – Heemaal News Network
Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Ciise Cawad oo weli ku sugan magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland ayaa markii horreysay ka hadlay xiisada webiga Nile ee u dhexeysa dalalka Itoobiya iyo Masar.
Cawad ayaa cadeeyey mowqifka dowladda federaalka, wuxuuna sheegay inay Soomaaliya dhex-dhexaad ka tahay khilaafka xoogan ee u dhexeeya labadaasi dal.
Sidoo kale wuxuu sheegay in fursada kaliya ee u furay dowladda Soomaaliyeed ay tahay inay isku soo dhaweyso labada dhinac.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka oo sii hadlayey ayaa daboolka ka qaaday in marnaba Soomaaliya loo yeerin doonnin go’aankeeda, siduu hadalka u dhigay.
“Khilaafka u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya ee Wabiga Nile Soomaaliya waxay ka taagan tahay dhex dhexaad, haddii loo baahdo Soomaaliya waxay ka gacan geysaneysaa xalka khilaafkaas loo heli lahaa, iyo isu soo dhowaanshaha, kaalinteeda waxa weeye dhex dhexaadnimo iyo suurta gelin in khilaafkaas soo afjarmo.” ayuu yiri Axmed Ciise Cawad.
Dhinaca kale wuxuu beeniyey wararka sheegaya in Soomaaliya ay saxiixday qaraarkii ka soo baxay shirka Jaamacadda Carabta ee lagu taageeray dowladda Masar, balse la sheegay in markii dambe ay ka laabatay, kadib cadaadis uga yimid dhinaca Itoobiya, isagoo dhamaan wararkaasi gaashaanka u daruuray, kuna tilmaamay kuwa waxba kama jiraan ah.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo saacadihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay shaacisay in dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ay soo gaar siiyeen dhambaallo ay uga xun-yihiin qaraarkii Jaamacadda Carabta ee lagu taageeray Masar.
Puntland Oo Ka Hadashay Xildhibaan Lagu Dilay Gaalkacyo